မြန်မာ့လူဦးရေ ( ၂၀ ) ရာခိုင်နှုန်းသာအခမဲ့ ကာကွယ်ဆေးရရှိမည်ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ခင်ခင်ကြီးပြောဆို – Shwe Myanmar
မြန်မာ့လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ရရှိမည်မြန်မာ့လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ (၁၀.၈သန်း) အတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထပ်မံဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောပါတယ်။…
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ GARVI (ဂါဗီ) အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ COVAX (ကိုဗက်စ်) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အတွက် အခုလို ကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီး (၃)ရာခိုင်နှုန်းက (၂၀၂၁) ဒုတိယသုံးလပတ်နဲ့ကျန်တဲ့ (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းးက (၂၀၂၁) တတိယသုံးလပတ်မှာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။…. ဒါ့အပြင် GARVI (ဂါဗီ) အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ နောက်ထပ်လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့
(၁၀.၈) သန်းအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံဝယ်ယူဖို့ တင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးကို (၅) ဒေါ်လာကျမယ်ဆိုရင် (၅) ဒေါ်လာ သသယ်ယူစရိတ်ကဒေါ်လာတစ်ဝက်ဆိုရင် (၅.၅) ဒေါ်လာနဲ့ လူဦးရေ (၁၀.၈)သန်းအတွက် (လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း) နောက်ထပ်မှာယူဖို့ ဒါကိုတင်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာပြီဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးရဲ့ေ
ဘးကင်းလုံခြုံမှု စိတ်ချရမှုဆိုတာက ရှိပါတယ်…။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ အခုဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုစီအလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ဘယ်လောက်ထိစိတ်ချရသလဲ။ ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ လက္ခာဏာတွေရှိလဲဆိုတာကို အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး လေ့လာနေပါတယ်လို့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်…။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ COVAX (ကိုဗက်စ်) အဖွဲ့နဲ့ GARVI (ဂါဗီ) အဖွဲ့အစည်းတို့ကေ
ရွးချယ်ပေးတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ဦးစွာရရှိမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်၊ ရုရှား၊ ယူကေ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ သံတမန်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီး ကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့လည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးရရှိလာရင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနဲ့ ဆေးစစ်ဌာနတွေကိုလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူခွင့်၊ ထိုးနှံခွင့်တွေပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မွနျမာ့လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုငျနှုနျးအတှကျ ကိုဗဈကာကှယျဆေး အခမဲ့ရရှိမညျမွနျမာ့လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုငျနှုနျးအတှကျ ကိုဗဈကာကှယျဆေးအခမဲ့ရရှိမှာဖွဈပွီး နောကျထပျ လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုငျနှုနျးဖွဈတဲ့ (၁၀.၈သနျး) အတှကျ ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထပျမံဝယျယူသှားမှာဖွဈတယျလို့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစကျရောဂါတိုကျဖကျြရေးဌာနခှဲ၊ ညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာခငျခငျကွီးက ပွောပါတယျ။…
ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့နဲ့ GARVI (ဂါဗီ) အဖှဲ့အစညျးတို့ပူးပေါငျးထားတဲ့ COVAX (ကိုဗကျဈ) အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှမှော မွနျမာနိုငျငံပါဝငျတဲ့အတှကျ အခုလို ကာကှယျဆေးအခမဲ့ရရှိမှာဖွဈပွီး (၃)ရာခိုငျနှုနျးက (၂၀၂၁) ဒုတိယသုံးလပတျနဲ့ကနျြတဲ့ (၁၇) ရာခိုငျနှုနျးးက (၂၀၂၁) တတိယသုံးလပတျမှာ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။…. ဒါ့အပွငျ GARVI (ဂါဗီ) အဖှဲ့အစညျးရဲ့ အကူအညီနဲ့ နောကျထပျလူဦးရေ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈတဲ့
(၁၀.၈) သနျးအတှကျကာကှယျဆေးတှထေပျမံဝယျယူဖို့ တငျထားပွီးဖွဈတယျလို့ ဒေါကျတာခငျခငျကွီးကပွောပါတယျ။ကာကှယျဆေးတဈလုံးကို (၅) ဒျေါလာကမြယျဆိုရငျ (၅) ဒျေါလာ သသယျယူစရိတျကဒျေါလာတဈဝကျဆိုရငျ (၅.၅) ဒျေါလာနဲ့ လူဦးရေ (၁၀.၈)သနျးအတှကျ (လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျး) နောကျထပျမှာယူဖို့ ဒါကိုတငျထားပွီးလညျးဖွဈပါတယျ။ ကာကှယျဆေးပျေါလာပွီဆိုရငျ ကာကှယျဆေးရဲ့ ဘေးကငျးလုံခွုံမှု စိတျခရြမှုဆိုတာက ရှိပါတယျ…။
ဒါ့ကွောငျ့မို့လို့ အခုဆိုရငျ ကာကှယျဆေးတဈခုစီအလိုကျ ကာကှယျဆေးထိုးပွီးရငျ ဘယျလောကျထိစိတျခရြသလဲ။ ဘယျလိုနောကျဆကျတှဲရောဂါတှေ လက်ခာဏာတှရှေိလဲဆိုတာကို အမွဲမပွတျစောငျ့ကွညျ့ပွီး လလေ့ာနပေါတယျလို့ ဒေါကျတာခငျခငျကွီးကပွောပါတယျ…။ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ COVAX (ကိုဗကျဈ) အဖှဲ့နဲ့ GARVI (ဂါဗီ) အဖှဲ့အစညျးတို့က ရှေးခယျြပေးတဲ့ ကာကှယျဆေးတှကေို ဦးစှာရရှိမှာဖွဈပွီး
အမရေိကနျ၊ ရုရှား၊ ယူကေ၊ အိန်ဒိယ၊ တရုတျအစရှိတဲ့နိုငျငံတှနေဲ့ သံတမနျခငျြးခြိတျဆကျပွီး ကာကှယျဆေးရရှိဖို့လညျး ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ကာကှယျဆေးရရှိလာရငျ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံနဲ့ ဆေးစဈဌာနတှကေိုလညျး ကာကှယျဆေးထိုးခှငျ့ပေးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကာကှယျဆေးဝယျယူခှငျ့၊ ထိုးနှံခှငျ့တှပေေးနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျနတေယျလို့ ဒေါကျတာခငျခငျကွီးက ပွောပါတယျ။